एक असफल मोबाइल ईमेल पठाउने7तरिकाहरू Martech Zone
एक असफल मोबाइल ईमेल पठाउने7तरिकाहरू
रेचमेल आंकडाले देखाउँदछ कि 40०% भन्दा बढि ईमेलहरू मोबाइल उपकरणहरूमा खोलिएका छन्। म दिनभरमा मेरो मोबाइल उपकरणमा ईमेलहरू ब्राउज गर्दछु ताकि म ईमेलहरू भेट्टाउन सक्दछ जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। धेरै मेटाईएका ईमेलहरू म वाणिज्यिक प्रकृतिमा छन् र मेरो आईफोनमा अपठनीय छन्। जूम गर्न वा ल्यान्डस्केप मोडमा स्वैप गर्न प्रयास गर्नुको साटो, म तिनीहरूलाई मेटाउँछु। जे होस्, जब म ईमेलमा पुग्छु जसले महान फन्टहरू र सफा रूपरेखा राख्छु, म प्राय: केही समय खर्च गर्दछु र यसमार्फत स्क्रोल गर्दछु।
रेचमेलले मोबाईल अभियानमा के बेवास्ता गर्ने भन्नेमा हाम्रो इन्फोग्राफिक ल्याउँदछ असफल मोबाइल ईमेल अभियान चलाउने W तरिका.
व्यवहार मोबाईल ईमेल र यसको समयसँगै परिवर्तन भयो कि ईमेल मार्केटर्सले उनीहरूको ईमेलहरू पढ्न योग्य, सान्दर्भिक र उनीहरूका ग्राहकहरूले मूल्यवान भएको कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि उत्तम अभ्यासहरू समावेश गर्दछ। जतिसुकै सानो भए पनि, म अझै पनि मेरो मोबाइल उपकरणमा सदस्यता रद्द बटन फेला पार्छु जब ईमेलले मेरा अपेक्षाहरू पूरा गर्दैन।
टैग: ईमेल डिजाइनमोबाइल ईमेलमोबाइल ईमेल डिजाइनपोहोचमेल
LucidPress: सहयोगी अनलाइन प्रिन्ट र डिजिटल प्रकाशन
उत्कृष्ट पोष्ट र जानकारी ग्राफिक किनकि यसले सबै सहि ठाउँहरूमा हिट गर्दछ! जबकि यो "नकारात्मक" मा प्रस्तुत गरिएको छ यो एक वास्तवमै राम्रो काम गर्छ तपाइँको के आधारभूत प्रिन्सिपलहरू वर्णन गर्न।